रेखा थापाको लज्जास्पद हार, उनको पक्षमा जम्मा कति मत आयो ? – List Khabar
Home / समाचार / रेखा थापाको लज्जास्पद हार, उनको पक्षमा जम्मा कति मत आयो ?
admin December 5, 2021 समाचार Leaveacomment 253 Views
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन विजयी भएका छन् । अध्यक्ष कमल थापालााई हराउँदै लिङ्देन विजयी भएका हुन् ।उपाध्यक्षमा विक्रम पाण्डे, बुद्धिमान तामाङ, ध्रुव बहादुर प्रधान र महिलातर्फ रोशन कार्की विजयी भएका छन् । यस्तै महामन्त्रीमा महिलातर्फ कुन्ती शाही विजयी भएकी छन् ।
यस्तै खुल्लातर्फ धवल शमशेर राणा र भुवन पाठक विजयी भएका छन् । राप्रपाको अध्यक्षसहित पदाधिकारीमा उपाध्यक्षतर्फ ४ र महामन्त्रीमा ३ पदमा निर्वाचन भएको थियो ।महामन्त्री पद लडिरहेकी अभिनेत्री रेखा थापा र कुन्ती शाहीबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो । कुन्ती शाहीले फिल्म खेलेजस्तो राजनीति सजिलो नभएको बताएकी थिइन् ।
सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेला शिरमा कफन बाँधेर २०६३ साल देखि राजसंस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार आज पाइयो । सो एजेण्डाको मूल संवाहकलाई राजनीतिकरुपमा समाप्त पार्न गरिएको चेष्टाले राजाको भलो होस्। हार्दिक शुभ-कामना।,’ उनको भनाइ छ ।
Previous छिमेकीकाे लुगा फिर्ता नगरेपछि श्रीमानले दिए डि’भाेर्स